🥇 ▷ Kani waa kiiska cusub ee 'Xiaomi Mi 10' oo cusub kaas oo isku daraya howlaha caqliga leh ✅
Kani waa kiiska cusub ee ‘Xiaomi Mi 10’ oo cusub kaas oo isku daraya howlaha caqliga leh
Febraayo 13, oo ay weheliso soojeedinta cusub. Xiaomi Mi 10 Y 10 kamid ah aqoonyahanadeyda, shirkaddu waxay sii deysay kiiskeeda rasmiga ah. Qalabka la yaab leh, ee ka gudba ilaalinta gabbaadka, ayaa isku daraya howlaha caqliga leh.
Tani maahan markii ugu horreeysay ee ay Xiaomi ay soo saarto dacwad rasmi ah. casriga. Iyadoo aan hore loo sii socon, Xiaomi Mi 9 Kii ugu dambeeyay, iyo sidoo kale Xiaomi Mi 9T iyo Mi 9T Pro waxay leeyihiin daboollo rasmi ah oo u gaar ah oo laga sameeyay midabyo kala duwan.
Ma aha sidan oo kale, tani waa mid cusub daboolka buugga isku darka Xiaomi Mi 10 iyo Xiaomi Mi 10 Pro muuqaal caqli badan taas oo aan in muddo ah ku aragnay telefoonnada gacanta casriga ah ee noocyada kale ah
Sida cusayb ahaan, geeska kore ee daboolka kiiskan cusub waxaan helnaa meel yar oo noo oggolaaneysa inaan aragno shaashadda marinka. Markaan xirano tan, aaladaha mobilada ayaa ogaan kara Waana layaab in aan ku arko geeskan mid xiiso leh laakiin ka sarreeya saacad kasta oo la taaban karo.
Intaa waxaa sii dheer, geeska marinka oo had iyo jeer ilaaliya geesaha, waanu arki karnaa taariikhdaugu dambeeya ogeysiin Y boqolkiiba boqolkiiba batteriga.
Tani, oo ay weheliso shaashadda AMOLED ee ay taageerayaan labada aaladood, waxay damaanad noo siineysaa tamar wax ku oolla iyadoo aan la isticmaalin tamar ku filan oo lagu mahadiyo.
Haatan, kiiskan cusub ee ilaalinta ayaa lagu iibiyaa Shiinaha oo keliya, oo laga heli karo madow iyo casaan. Qiimaha waa kaliya 69 yuanwax yaroo 9 euro Isbeddelka iyo hadda lama oga inuu gaari doono suuqa caalamiga ah nooca cusub ee Xiaomi Mi 10 iyo Mi 10 Pro.